अप्ठ्यारो र दुखमा नै हो आफन्त र पराई छुट्टाउने - सुनाखरी न्युज
अप्ठ्यारो र दुखमा नै हो आफन्त र पराई छुट्टाउने
Posted on: July 19, 2021 - 10:45 am
विश्व पौडेल – अप्ठ्यारो र दुखमा नै हो आफन्त र पराई छुट्टाउने, यस्ता परिबेशले आफैलाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिल्छ । कमिकमजोरि सुधार्न सके चुनौतिलाई अबसरमा बदल्न सकिन्छ, कहिले काहीँ सत्ताको उन्मादले अन्धो बनाउछ, सुखमा वरिपरि रमाउनेहरू दुखमा टाढिन थाल्छन् अबसरबादिहरूले रंग फेर्छन् भ्रमको तुवाँलो र लोभको बादल हटेपछि वास्तविक धरातल बल्ल देखिन्छ ।
अहिले क्रमश तुवाँलो र बादल हट्दै छ । अब संगठन सुद्दिकरण गर्न जरुरी छ गल्ति कमजोरि ढाकछोप नगरि आत्मआलोचना सहित सुधार्न सकियो भने फेरि झिसमिसे बिहानिमा लालि छाउनेछ । रंगफेर्ने अबसरबादिहरूलाई निर्मम कार्बाहि हुनुपर्छ । कमिकमजोरि भए पो सुधार्नु अपराधी हरूलाई सदाको लागि पारपाचुके गर्नु पर्छ । आउनेलाइ समेट्दै जानेलाई गाडिभाडा दिएर पठाईदिए हुन्छ ! सत्ता आउने जाने भै रहन्छ आत्तिन र मात्तिन जरुरी छैन ।अब पनि यति शिक्षा लिन नसके भबिश्यले धिकार्ने छ ।
🤝 कार्यकर्ता माझ बसेर निष्ठा र नैतिकता बचाउदै संगठनमा काम गर्नेलाई सबै तहका कमिटिमा बिनाभेदभाब जिम्मेवारी दिनु पर्छ । ब्याक्तिगत निकटताको आधारमा हैन ।
🤝 चुनैति र अबसर सहित परिबेश र समय फेरिएको बर्तमान अबस्थामा कसले फेसबुकमा राम्रो फोटो सेयर गर्दिन्छ, आउदा जादा एयरपोर्ट र होटलमा लानेल्याउने कसले गर्छ, कमिकमजोरि गर्दा पनि आहा भन्दै कसले तालिबजाउछ, कसको ख‍ल्टि गरम छ, धन को सग छ, यस्तो आधारमा हैन, जनता र गाउँ बस्तिमा काम कसले गरेको छ, जनताबिच को लोकप्रिय छ , संगठनले कसलाई सिफारिस गर्छ, पटक पटक अबसरबाट बंचित हुदा पनि निरन्तर पार्टीको झोला कसले बिसाएको छैन अब तल देखि माथि सम्म अब टिकट दिदा ख्याल गरिनु पर्छ । अबसरबादिले जित्नु भन्दा बरू हार्नु बेश हुन्छ । निष्ठावानको हार भोलि जितको आधार बन्छ ! अबसरबादिले एकैपल्ट पायो भने सधैंलाई बंजर बनाएर छोड्छ ।
🤝याेग्य मान्छेलाई जिम्मेवारी दिदा भाेलि आफ्नै प्रतिस्पर्धि हुन्छ कि भनि तलैबाट तर्काउदै जाने प्रबृतिले सक्षमहरू किनारा लागि पलायन हुँदै जाँदा अबसरबादिले ठाउँ ओगटे । जुन परिदृश्य आज आएर देखियो अब यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिनु पर्छ । प्रतिस्पर्धा आफै सग हुन्छ अरू सग हैन । कमजोरले बलियाको बाटो नछेकुन ।
🤝जहाँ स्थायि बसोबास जहाँ छ जिम्मेवारी त्यहि दिनु पर्छ, काठमाडौ बस्नेले दार्चुलाको काम कसरी गर्न सक्छ ? निकटको आधारमा बिकटको जिम्मेवारी दिदा संगठन बाँझो बन्यो, स्थानिय तहमा बसेर खनिखोर्सि गर्नेलाई नै त्यहाको जिम्मा दिनु पर्छ ।
🤝 जनबर्गिय संगठनमा केन्द्र तिर जिम्मेवारी दिदा अलिकति बैचारिक ज्ञान र नौतिक आचरण पनि ख्याल गरियोस । मिडियामा जिम्मेवार ब्याक्तिको तर्क सुन्दा मुख छोप्नु नपरोस । आकास फाटेको छैन ,,धर्ति भासिएको छैन ,,सुर्य फेरि उदाउने छ ।अरूलाई सराप्नु भन्दा आफू सुध्रिनेतर्फ लागौ ।
न सिट छ, न सामाजीक दुरी,जसरीनी परीक्षा दिनै पर्ने कस्तो मजबुरी ?
राप्रपा लाई पछाडि फर्कने सुविधा छैन : पाठक
बीथ्रीडब्लूको अन्तर्य : अझ, राम्रो विश्व निर्माण-२
बीथ्रीडब्लूको अन्तर्य : अझ, राम्रो विश्व निर्माण – १